Igumbi leGolf leThuthi leKhosi kwiSikolo samabanga aphakamileyo
Isikolo esiphakamileyo esiya kwi- Tiger Woods sisikolo sase-Western High, isikolo sikarhulumente esise-Anaheim, eCalifornia. Iimbalo ezimbalwa malunga neNtshona ePhakamileyo seSikolo:
Isiteketiso seqela lezemidlalo: Amaphayona
Imibala yesikolo: Ubomvu nomhlophe
Ukhonza amabakala: 9 ukuya ku-12
Isithili seSikolo: ISithili se-Anaheim Union High School
I-alumni ephawulekayo: Ukongeza kwi-Tiger, kukho uRandy Scheckman, ophumeleleyo kwi-Nobel Prize ye-Physiology okanye iMicrosoft ye-2013; abadlali bebhola bebhola ye-ligi kunye no-Andy Messersmith noJohn Moses; kunye nabadlali beNFL uMike Iupati noFili Moala.
IiNyaka zeTiger kwiSikolo esiphakamileyo seNtshonalanga
I-Woods yayiya kwi-Western High School iminyaka emine, ukususela kwiminyaka eyi-15 ukuya kwe-18, iphumelele ngo-1994. I-Woods yabhaliswa kwiNtshonalanga ePhakamileyo xa ephumelele iqhawe lakhe lokuqala lo-USGA, i-US US Junior Amateur Championship, eyi-15 ubudala. xa eqala ukudlala kwi-PGA Tour , eyenzekayo eneminyaka eyi-16.
I-Woods yayisigaba se-1994 esiphakamileyo seNtshona. Abafunda naye bavotela inhlonipho kuye kwaye, ngokuphindaphindiweyo, kucacile ukuba benze ukhetho oluhle kakhulu: Bavotela iTiger "Ininzi Inokwenzeka Ukuphumelela."
Ngaba Amatye aKwadlala kwiQela laKhe leGlasi eliPhakamileyo?
Ewe, i-Woods yayidlala kwiqela leGolf leNtshona. I-High High School yadlala iimidlalo zayo phantsi kwe-California Interscholastic Federation, okanye i-CIF.
Ngethuba leminyaka ye-Woods, i-CIF ayizange iqhube iqhankqalazo likarhulumente kwigalufa, kodwa yahlula umbuso kwi-half-Northern ne-Northern half.
Ngoko umqhubi wezikole eziphakamileyo eziphakamileyo ze-Woods yi-CIF SoCal Regional, kwaye iTiger yanqoba loo mqhudelwano, ngo-1991.
I-Woods yayiyi-CIF yeSigqeba esisezantsi kwiqela elincinane kathathu, ngowama-1991, ngo-1993 no-1994. I-Western High School yayilungu le-Orange County League ngelo xesha, kwaye iTous yabizwa ngokuba ngumdlali onguMdlali oxabisekileyo kakhulu kwiminyaka emine esikolweni esiphakeme.
Kwakhona waphumelela iMahia yoTywala njengomdlali ophezulu wesigxina esikolweni e-United States ngo-1993.
Ngubani owayengumqeqeshi weglasi ophezulu weGolf?
Umqeqeshi wegolfu ophakamileyo weGolf u-Don Crosby, owathi wabhala incwadi ethi, iTiger Woods yandenza ngathi ngathi i-Genius: Iindlela ezi-5 ezilula zokuthabatha izibetho ezilishumi . Ngo-1994, uCrosby kunye no-Woods oneminyaka eyi-18 baxoxwa kunye ne-California-based based sports show show, kwaye loo ndlebe ndlebe iyatholakala kwi-YouTube.
UCrosby wayeseneminyaka engama-50 ubudala xa waqeqesha amahlathi eWestern High. Waqalisa inkqubo yegalufa e-kolweni ngo-1986 kunye nenkqubo yamantombazana ngo-1998. Wahlala umhlala-phantsi evela kwi-Western High School emva kwexesha le-golf le-1999 esikolweni esiphakamileyo.
Iinqaba ezinkulu zeTolds kunye neeKhenketho ngexesha lokuPhakamileyo kweSikolo
Ngokuqinisekileyo, i-Woods yayidlala ezininzi iikhomphenyana ngaphandle kwesikolo esiphakamileyo, naye, phakathi neminyaka yakhe kunye nabaNxweme beNtshona: i-American Junior Golf Association kunye nezinye iindibano eziphambili ze-US, i-USGA tournaments, kunye neendwendwe.
I-Woods yayineminyaka engama-16 ubudala kwaye i-sophomore kwi-Western High School xa yenza uhambo lwakhe lokuqala lwePGA Tour ngo-1992 iNissan Los Angeles Open kwi- Club Riviera Country Club .
Njengomntu ophakamileyo wesikolo, oneminyaka eyi-15 ubudala, uThomas wawubamba iqhawe lakhe lokuqala lo-USGA, u-1991 wase-US Junior Amateur.
Uphindaphindiwe njengengqungquthela kuloo mcimbi ngo-1992 no-1993, ngokunjalo, ngelixa esesesikolweni esiphakeme. (Owokuqala kweentombi zakhe ezintathu ze-US Amateur Championship wafika emva kokuba ephumelele esikolweni esiphakeme ngo-1994.)
Emva kokugqiba isikolo seNtshona Koloni ngo-1994, u- Woods waya ekholeji kwiYunivesithi yaseStanford .
Indlela yokucoca i-Laboratory Glassware
Iingcamango zoLwazi lweeNzululwazi zoBulungisa: Ukutya kunye neKhemistry yokuCoba